Ndeipi nzira dzokuwedzera Amazon UK sales?
Amai ama Amazon akatanga iri bhizinesi sechitoro chekushambadzira paIndaneti. Gore rino Amazon inopemberera gore rayo rechi20 semutengesi mukuru weInternet. Icho muenzaniso wakajeka wekuti kushivirira nekushanda zvakaoma zvinogona kuchinja sei bhizinesi remukati munzvimbo yakakurumbira yebhizimisi renyika.
Kuzivikanwa kwepuratifomu iri kukura nevatengesi. Maererano nehuwandu hwemashoko, $ 88,000 anoshandiswa muminiti yose pasi rose pamusoro pekutengeserana - secured debt settlement. Saka, ndiwo mukana wakakwana kune vatengesi kuti vawedzere bhizinesi ravo ipapo uye kukurudzira huwandu hwemari.
Zvisinei, hazvisi nyore sezvazvakanga zvakaita kare, kuwedzera kutengesa kuAmazon. Zuva rimwe nerimwe zviuru zvevatengesi vatsva vemuInternet vanoedza ruzivo rwavo pachikuva uye mushure mokukwikwidzana kuri kuwedzera nekufambira kwemajometri. Ndicho chikonzero kuti zvionekwe pachikuva ichi; iwe unoda kuziva dzimwe nzira dzinonyengera kuti ungawedzera sei Amazon UK sales uye iwe unokwanisa kuvashandura kuti vashandise.
Nyaya ino yakagadzirirwa kuratidzira nzira yekuvandudza Amazon account yebhizimisi yako kuitira kuti ionekwe nevatengi vako vanobva kumativi ose enyika. Saka ngatitaurirei mamwe maitiro aya eAmazon optimization.
Nzira dzinobatsira kuti uwedzere kutengesa kwako kuAmerica UK
Simba rekuongororwa kwehupenyu hakugoni kuderedzwa. Zvinonyanya kukosha kwebhizimisi rako sezvo vashandisi vachigadzira kutenga kwavo kusarudza zvichienderana nekuongorora kwezvinhu zvenyu. Kazhinji kutaura, mutengi chisarudzo isarudzo yekuita zvisarudzo zvevanotarisira vatengi pamusoro pekutengeswa kwemari kwekare panguva yekutengeswa kwechigadzirwa kana basa. Chibereko chiri nani chinotsanangura iwe, iwe wakakwirira iwe uchagadzirisa pa Amazon search result page. Maererano nehuwandu hwemashoko, zvinopfuura 88% zvevatengi vanoongorora zvinyorwa zvese nezvechigadzirwa vasati vatenga.
Semunhu anotengesa mutengesi, unofunga kufunga zvisingaoneki uye kutsvaga nzira dzakanakisisa dzekugadzirisa matambudziko. Semuenzaniso, tsvaga zviongorudzo pane zvigadzirwa zvako zvinosanganisira multimedia. Zvose zvinongororwa nemufananidzo wemufananidzo kana unboxing mavhidhiyo zvinogona kubatsira marimi ekuvandudza marimi. Iwe unogona kukurudzira vatengi vako kuti vaite zvidzidzo zvakadai zvekusika kwekuderedza kana chipo. Kana uchiziva vanhu vomunharaunda yako vakafarira chigadzirwa chako, saka vabvunze kuti vabve kuongororwa pama Amazon yako peji.
Zvakare, unogona kushandisa mapurogiramu akasiyana-siyana ekuwedzera kuwedzera kwehuwandu hwekuongororwa kunoitwa uye kuchinja mararamiro asina kukodzera kana asina kunaka muzvinhu zvakanaka.
Batsirwa kubva kune kupaaways
Sezvandakambotaurwa kare,. Saka kuti uwane hutsva hunodiwa, iwe unogona kupa vatengi vako kushandiswa kwekodhi mukutsinhana kwekuongorora. Somugumisiro, inogona kuvandudza pakarepo ma Amazon yako yekutsvaga uye kukubatsira kuti uwedzere kutengesa kwako.
Uyezve, iri pfungwa yakanaka yekugadzira zvipairo nguva dzose. Ichakubatsira iwe kuumba chimiro chakanaka chechirwere chako uye kuunza nyasha. Kana vashandi vachiramba vachigutsa hutano hwezvigadzirwa zvako, ivo vachave vauya kuzouya kwamuri nguva inotevera.